Yakanakisa Magnesium L-threonate powder Mugadziri & fekitori
Magnesium L-threonate poda (778571-57-6)
Cofttek ndiyo yakanakisa Magnesium L-threonate poda inogadzira muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi system (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 3300kg.
Magnesium L-inotyisa upfu (778571-57-6) vhidhiyo
Name: Magnesium L-inotyisa
Molecular Kurema: 294.495 g / mol
Kemikari zita: Magnesium (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
Application: Magnesium L-Threonate ndiyo fomu inonyanya kutora yeMagnesium Mapiritsi. Izvo zvinoshandiswa kugadzirisa ndangariro, kubatsira nehope, uye kuwedzera basa rekuziva rakazara.
Magnesium L-threonate poda (778571-57-6) NMR Spectrum
Magnesium, sekuziva kwedu inyanzvi yemaminerari, yakakosha kwazvo pahutano - kunyanya kune huropi uye nehurongwa hwedu hwese hwetsinga. Magnesium - divalent cation (yakanaka inobhadharwa ion), yakakosha zvakanyanya pakuumbwa kwakaringana kwemasekete eurononal sezvo ichisunga kune maurotransmitter receptors uye iri chinhu chinobatanidza maenzymes euronal. Yakave yakatarwa zvakadzama kuti ibatsire kudzikisira kushushikana, kushushikana uye nenyaya dzetsinga. Munzvimbo inoshanda yemushonga, vazhinji vevanyanzvi vehutano vanonzwa kudiwa kwekuwedzera kwemagnesium kune varwere vavo mune zvavanoita. Ikozvino Yakakurudzirwa Dietary Allowance ye magnesium iri pakati pe300 ne420 milligrams / zuva kune vanhu vazhinji, kazhinji inowanikwa kuburikidza nechikafu. Nekudaro, iyo inofungidzirwa avhareji chinodikanwa (EAR) ye magnesium haina kuwanikwa kuburikidza nekudya. Chiverengero chinotyisa chiri kunze uko. Izvi zvinopedzisira zvaenda mukushomeka kwemagesium iyo inogona kukonzeresa zvimwe zvakakomba zvehutano sekutambudzika kwekukuvara kwehuropi, kusagadzikana kwetsinga, chirwere cheParkinson neAlzheimer, kutemwa nemusoro, kushushikana, kukuvara kwehuropi, kushungurudzika, uye mamiriro ane hukama nemapfupa. Ikoko ndiko uko kwakasiyana mafomu ekuwedzera emagesium anopinda mumufananidzo. Nekudaro, pane dambudziko padhuze nekushandiswa kwemagesium inowanikwa seyakawedzera kumatambudziko ehungwaru nehutano hwepfungwa - zvinoita kunge zvisingaite nyore muuropi. Rudzi rwekuchinja kwemagnesium - Magnesium l-threonate, inoita kunge iri kubatsira pano.
Zvakazarurwa - Magnesium L-Threonate poda
Kazhinji zvinowanika magnesium zvinowedzerwa zvinoitirwa kuitiswa zviri nani uye ndizvo zvakaitawo Magnesium I-threonate. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekubatana zvirinani kwema magnesium mamorekuru ayo anobatsira kugadzirisa kudzikama, mwero wekutora uye kushanda. Magnesium I-threonate ndiyo yazvino fomu magnesium. Chikwata chemasayendisiti kubva kuMassachusetts Institute of Technology uye Tsinghua University muBeijing chakagadzira Magnesium I-threonate nekusanganiswa kwemagnesium uye I-threonate, metabolite yeVitamin C. Izvi zvinoshamisa kuwedzera inofambisa zviri nyore kuburikidza neyekuchengetedza firita yehuropi kuti isvike kwayinofanira kusvika. Magnesium I-threonate isiri yechisikigo ishoma sezvo mabhenefiti ayo ari makuru.
Inowanikwa muEpsom munyu, Magnesium sulphate haisi nyore kupinza nemuviri uye nekudaro ine mimwe mhedzisiro. Kusanganisa threonic acid uye magnesium, Magnesium I-threonate inoumbwa semunyu unogona kufamba muropa kubva muropa. Pakutanga izvi zvaigona kuzadzikiswa nekutakura chete. Sezvinoenderana nekutsvagurudzwa kwemhuka iyi ndiyo zvakare nzira inoshanda kwazvo yekukonzera magnesium mumasero ehuropi.
Aya Magnesium I-threonate zvinowedzera zvakaratidza kuve sosi inoshanda kwazvo yekutsigira mashandiro ekuita uye kuumba mhuri yema nootropics pamwe chete nemishonga yekunyorera.
Magnesium I-threonate inoshanda
Chikafu chemazuva ano hachina magnesium uye nekuwedzera, inowanzo kuwanikwa mishonga inowedzera kuwedzera mwero wemagesium. Munyika zhinji kusanganisira United States, isingasviki 50% yevagari inosangana neinokurudzirwa kudya kwezuva nezuva kana mvumo (RDA) yemagesium. Kunyangwe iyo huropi ichida huwandu hwakawanda hwemagesium, huwandu hwepamusoro huripo muropa.
Magnesium yakakosha kune akawanda emitsipa mashandiro uye mamiriro anosanganisira:
Kukuvara kukuru kwehuropi kana kukuvara
Kufenda uye Schizophrenia
Zvinotyisa ndezvokuti hapana huwandu hwakakwana hwemagesium inoguma munzvimbo yehuropi, ichitadzisa kushanda kwayo. Apa ndipo panowanikwa Magnesium l-threonate supplementation inozodiwa kuti izadzise kusakwana kwemagnesium, kunyanya kana vanhu vasiri kushandisa magnesium yakakwana kuburikidza nezvikafu vachiratidza kuderera kwehunhu hwekuziva pamwe nezviratidzo zvinoenderana.
Kushanda kweMagnesium l-threonate
Inopinda nepakati kuti isvike munzvimbo chaiyo yeuropi, uko kunodiwa magnesium.
Iyo inovandudza kugona kwehuropi kufambira mberi uye kukura izvo zvinobatsira pakuziva nekudzidza kuitika.
Inobatsira mukusimudzira kukura kwemasero matsva ehuropi.
Magnesium I-threonate powder Makomborero
Magnesium ine zvakawanda zvakanaka zvehutano. Inotorwa muchikamu chakaringana, inozivikanwa kukwidziridza manzwiro, kukurudzira kusimba kuti utsungirire nekushushikana, kuwedzera kugona kuisa pfungwa nekutarisa, kuwedzera simba uye kugadzirisa kunaka kwekurara. Iyo zvakare inobvisa mangwanani hutsi hwehuropi (mamiriro ekuvhiringidzika, kusarangarira ndangariro, uye kushomeka kwekusimbisa uye kutarisisa uye kujekesa kwepfungwa) - chiratidzo chakajairika neVestibular Migraine
Kukwanisa kwehuropi kuchinja neuroplasticity (inozivikanwawo seipurasitiki, kana uropi hwepurasitiki). Uku kuchinjika kunoona kuti uropi hunokwanisa kugadzira nyowani neural kubatana (mitezo yeurouronal) uye zvinokanganisa kudzidza, ndangariro, hunhu, uye kuita kwakawanda kwekuziva. Brain plasticity inotora chinzvimbo chakakosha mukukwegura kwehuropi, nekurasikirwa kwepurasitiki kunokonzera kurasikirwa kwekuziva kwekuita. Tsvagiridzo yeurouroplasticity kana huropi hwepurasitiki iri kuwedzera uye nyanzvi dzehutano nemasayendisiti vari kuona kuti kuwedzera neuronal maseru magnesium mazinga anogona kukwidziranisa synapse density uye plastiki, kunatsiridza kwese kugona kwekuziva. Iri kuratidza zvakare mibairo inovimbisa kubatsira mu "rewiring" uropi mune zvinoitika zvekukuvara kwekukuvara kwehuropi uye nenyaya dzehutano hwepfungwa. Chero ipi magnesium yekuwedzera inogona kunge isingabatsire kugadzirisa iyo nyaya-Magnesium l-threonate inonzi yakayambuka ropa-huropi chipingamupinyi kuti inyatsosimudzira mazinga e magnesium muuropi.
Uye zvakare, inewo mamwe mabhenefiti ehutano anosanganisira kuramba kubva paasima, kurwadza mumhasuru, kusimbisa immune system, yakakwira BP, osteoporosis uye mamiriro emoyo.
Magnesium l-threonate ine yekuzorodza mhedzisiro, inodzoreredza tsinga uye inobatsira mukudzivirira uye kurerutsa pfari uye zvimwe zvine chekuita nehutano zvine chekuita.
Magnesim l-threonate inosimbisa mapfupa nekusimudzira huwandu hwemapfupa, inoderedza kuzvimba, inovandudza hunhu hwekurara uye inojekesa nzira yekugaya.
Magnesium I-threonate chigadzirwa chitsva uye nekudaro haina humbowo hwakareba hwekushandisa kwayo. Izvi zvinowedzera kukosha kwekutsvagisa kwechokwadi zvakanyanya. Kiriniki yekuyedza yakaitwa inobata zvinhu mukuvimbika kwayo.
Kliniki kutongwa kweMagnesium I-threonate
Chinyorwa chakaburitswa chekurapa chakapa kumwe kujekesa kunonakidza uye mabhenefiti ehutano eMagnesium I-threonate. Boka rekudzidza rine vanhu vakura vane mamiriro ekusungirwa, ndangariro, kushushikana kwekurara uye kushushikana zvakamakiswa pamatanho mana akasiyana - mashandiro ekurangarira, ndangariro yekudzora, kutarisa uye mabasa epamusoro. Izvi zvaisanganisira hunyanzvi hwakawanda hunobatsira mukuumba zvinangwa, kuronga uye kuita. Zvidzidzo zvakapihwa neMagnesium I-threonate kwemwedzi mitatu yakateedzana uye sezvaitarisirwa zvakazoonekwa kuti iyo mwero wemagesium yakawedzera zvakanyanya. Izvi zvakakonzera kuita kwechidzidzo munzvimbo dzese ina dzekuyedzwa. Izvo zvakare zvakakonzera kudzikiswa kweiyo zera reuropi zera. Mune mamwe mazwi, izvi zvidzidzo zvakakura angangoita makore gumi mudiki muzera ravo rehuropi. Zvisinei, Magnesium I-threonate yakanga isinganyanyi kubatsira nekuvandudza kurara, kukwidziridzwa kwemweya kana kudzikisira kunetseka kwechinhu ichocho.
Kudzidza pamhuka dzeMagnesium I-threonate poda
Zvidzidzo zvakaitiswa pamhuka zveMagnesium I-threonate zvine zvimwe zvinonakidza zvakawanikwa.
Kuzvidya mwoyo kusagadzikana maringe neMagnesium I-threonate
Magnesium I-threonate iri yepamusoro fomu yemagnesium inoshanda senge yakasununguka inozorodza uye inoshanda nekuderedza mahormone ekunetseka, ichiwedzera kudzikamisa kweiyo neurotransmitter GABA pachinzvimbo. Inobatsirawo mukudzivirira kushushikana kwemakemikari anopinda muuropi. Kuedza Magnesium I-threonate pamhuka kwakaratidza kuti inogona kuve bane yekubatsira nekushushikana kwekushushikana, zvakajairika phobias uye post traumatic disorder.
Magnesium I-threonate maringe neAlzheimer's uye Dementia
Magnesium I-threonate inozivikanwa zvakare yekurapa kuora mwoyo uye chirwere cheAlzheimer futi. Makonzo nemakonzo ave achishandiswa mukutsvaga Alzheimer sekurangarira kwavo uye kukura kwehuropi kwakafanana neyavanhu. Magnesium I-threonate yakawanikwa ichibatsira kubvisa kurasikirwa kwendangariro uye kupera kwepfungwa mumakonzo.
Iko kune musangano unozivikanwa pakati peakadzikira mwero wemagesium uye kurasikirwa ndangariro. Kuwedzera kwemazinga emagesium mukudya kunoguma zvakanyanya mukuora mwoyo. Tsvagiridzo ine tarisiro pane dzakawanda zveeuroprotective mabhenefiti akaedzwa pamakonzo anoratidza mukana wekurapa Alzheimer's muvanhu.
Magnesium I-threonate maringe nekudzidza uye kubata nomusoro
Makonzo paakapihwa Magnesium I-threonate akaita kuti vave nehungwaru. Vakaratidza kuda kudzidza uye nekuvandudza kushanda, kuwedzera kune pfupi uye kwenguva refu ndangariro.
Uchapupu uye rutsigiro rweMagnesium Threonate
Tsvagurudzo yekutanga paMagnesium threonate yakaratidza; kugadzirisa kwema chromosomes akakanganisika, kuwedzera padanho re magnesium muuropi uchienzaniswa nemamwe marudzi emagesium, kushanda zvirinani munzvimbo yekurangarira uye pamusoro pezvese shanduko yeyepfupi-ndangariro. Pakudya magnesium mune chero chimiro mumuviri, zvinotarisirwa kuita zviitiko zvakawanda zvinosanganisira mhasuru mashandiro, kuumbwa kwemapuroteni uye mafuta acids, kumisikidza B mavitamini, kugwamba kweropa, kuvhara insulin, uye kuumbwa kweATP. Uye zvakare, magnesium inoshanda seinosimudzira ma enzymes akasiyana siyana pamusoro pemuviri. Inobatsirawo mukuvaka immune system.
Kusarudzwa kweMagnesium I-threonate zvinowedzera
Ita shuwa kuti unotarisa iwo mavara zvakanyatso kuona kuti iyo yekuwedzera ine Magnesium I-inodonhedza.
Yakakurudzirwa muyero weMagnesium I-threonate poda
Iyo yakajairwa inokurudzirwa kudya kwemagnesium muvarume ndeye 420 milligrams uye mumadzimai iri 320 milligrams. Zvisinei, izvi zvinogona kusiyana zvichienderana nezera. Iko hakuna kunyanya kukurudzirwa kunwa kweMagnesium I-threonate. Kunyangwe 1500 kusvika 2000 mamirigiramu pazuva rinofanira kunge iri nzira yakanaka yekuziva kunobatsira. Muenzaniso chaiwo wekutengesa zvakanyanya ndeye Magtein iyo ine patentenate yeMagnesium I-threonate yakaedzwa pamhuka zvakare. Inoumbwa nemhando dzakasimba dzekushandisa zvinoshanda zvinowedzera.
Iyo yakakurudzirwa muyero weMagnesium I-threonate ndeiyi:
Vana pazasi pemakore gumi nematatu - 80-240 milligram / zuva
Vakadzi vanopfuura makore gumi nemana - 300 -360 milligram / zuva
Vanhurume vanopfuura makore gumi nemana - 400-420 milligram / zuva
Vakadzi vane pamuviri / vanoyamwisa: 310- 400 milligram / zuva
Kunyangwe izvi zvingaite senge hombe muyero, ramba uchifunga kuti chidimbu chete chinonyura. Nekudaro, zviuru zviviri zvemamirigiramu eMagnesium l-threonate inongoburitsa anenge mamirigrii zana nemakumi mana nemana e elemental magnesium, inova chikamu chetatu cheYakakurudzirwa Dietary Allowance ye magnesium.
Zvikonzero zvekutarisa akawanda masosi e magnesium
Iko hakuna chiri kukumisa iwe kubva pakuongorora akawanda mafomu e magnesium senge magnesium glycinate, citrate kana gluconate. Kune akawanda mafomati anowanikwa pamusoro pekambani yekudyiwa kwemagesium. Chiratidzo chekucherechedza chakakwana chekudya chemagesium dzakasununguka zvituru uye chinoshanda sechiratidzo chitsvuku.
Nemumuromo yakamwiwa Magnesium l-threonate inonzi yatora mwedzi mumwechete kuwedzera huropi hwemagesium kumatanho anodikanwa uko inogona kugadzirisa kumwe kushushikana kwehuropi, sekushushikana, kushushikana uye kurasikirwa nezviyeuchidzo zvezera uye zvine zvakakosha pakurangarira. kuumbwa uye kushanda kwehuropi.
Side mhedzisiro yeMagnesium I-threonate
Kune asi mashoma mashoma anozivikanwa mhedzisiro yeMagnesium I-threonate iyo inosanganisira kukotsira, kutemwa nemusoro, kusagadzikana kwehurosi kufamba uye kunzwa kuda kusvotwa. Iyo yakajairika mhedzisiro mhedzisiro inozivikanwa ye magnesium yekuwedzera inokanganisa kugaya system. Nekudaro, neMagnesium I-threonate, haifanire kuitika sezvo ichigadzirirwa kupinzwa zvakananga muuropi. Kana iwe uri pane chero mumwe mushonga, zvinokurudzirwa kubvunza chiremba wako kana Chiremba kuti uwane zano riri nani. Magnesium haina kukurudzirwa kune vanhu vane hosha dzeitsvo sezvo izvi zvinowanzo bvisa magnesium kubva mumuviri wako.
Mubvunzo chaiwo ndewekuti - Magnesium I-threonate inofanira kutorwa neimwe magnesium zvokuwedzera? Kana iwe uri kutora magnesium yezvinhu zvekudya, edza kutora Magnesium I-threonate. Kana iwe ukatanga kunzwa kubatirirwa kana kusununguka zvituru, zvingave zvakangwara kudzosera kumashure kune magnesium yega. Magnesium l-threonate ine caffeine inogona kusimudzira mashandiro uye kuita kwemuviri asi kana ichivimba nazvo, zvinogona kukonzera kuti muviri udzokere kuneta, kusagadzikana kwepfungwa, uye kusagadzikana kana zvikaramba zvichitorwa. Ichi ndicho chikonzero chekuchinja kwakanyanya mune vamwe vanhu uye kushaya kwavo kufarira uye kushingairira kuita zviitiko zvemuviri. Mumwe mubvunzo unowanzo bvunzwa ndewekuti zvinotora nguva yakareba sei kusvika iwe waona shanduko chaiyo? Nyanzvi dzehutano dzinokurudzira kumirira angangoita mavhiki mana kusvika masere usati wadonhedza pfuti dzako!
Ndiani asingatore Magnesium l-threonate?
Vanhu vane nyaya dzemwoyo
Vanhu vasina kudzora yakakwira BP (≥ 140/90 mmHg)
Vanhu vane chirwere chepfungwa vanoda chipatara mugore rapfuura
Vanhu vane renal kana hepatic kuora mwoyo / chirwere
Vanhu vanotambura neType I chirwere cheshuga
Vanhu vane chirwere cheshuga chisina kugadzikana
Vanhu vane immune immune yakadai seHuman Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome
Vanhu vakapinda mukushandisa zvinodhaka kana kudhakwa mumwedzi gumi nemiviri yapfuura
Vanhu vanotambura ne carotid bruits, yakasimbiswa lacunes, yekupedzisira ischemic kurwisa uye yakakosha pulmonary chirwere
Vanhu vane huturu mamiriro
Vanhu vane mamiriro ezvinhu iyo yekuwedzera inogona kupa kukakavara kwepositron emission tomography (PET) scan, kusanganisira sitiroko kana chirwere chemwoyo mumwedzi mitanhatu yapfuura kana kutadza kurara kweawa rimwe chete.
Vanhu vari pamishonga inorambidzwa kutorwa pamwe neyemagnesium zvinowedzera senge rinocheka ropa uye maantibioti.
Vanhu vane chisimbwa kana kunzwisisika kune chero chinhu chinoshandiswa mukuwedzera
Vakadzi vane nhumbu, vachiyamwisa, kana kuronga kubata nhumbu vanofanirwa kubvunza chiremba vasati vatora ichi chinowedzera
Kusarudza iyo chaiyo yekuwedzera: Magnesium l-threonate wongororo
Vanhu vane dambudziko rekurara uye kushomeka kwekutarisa vanoshandisa ichi chinowedzera - Magnesium l-threonate yakazara neVitamin-C threonate nekuti inoita kuti ive pamusoro mukuwanikwa mukuenzanisa neimwe generic Magnesium l-threonate supplement. Iyo yekuwedzera ine mukana wekuyambuka ropa-uropi chinodzivirira iyo inopa yakakwana magnesium muuropi uye inowedzera kugona kwekuziva. Nokubatanidza magnesium ne theanine uye mamwe mamineral akakosha, muviri unogona kupihwa zuva nezuva chikafu chinodiwa pasina kudzikisira mamwe mavhitaminzi uye zvicherwa.
Magnesium l-threonate inovandudza ndangariro mumunhu akura uyo ari pamusoro makumi mashanu uye anotambura nedementia, kurwara kwaPasinson kana kushaya simba kwezviratidzo zveitsinga.
Kushandiswa kwezuva nezuva kweyekuwedzera kunovandudza ndangariro, kunowedzera kugona kwekuziva uye kudzidza neanosvika gumi nemasere muzana mukati menguva yemazuva makumi matatu kusvika makumi matanhatu. Iyo inogadzira inozorodza uye inozorodza mhedzisiro pamhasuru uye inopa nekukurumidza panyama uye yekuziva inosimudzira.
Vamwe vanhu vanoona zviri nyore kutora ichi chinowedzera mune fomu yepiritsi sezvo paine gelatin inovhara pamapiritsi ari epakati nepakati, ari nyore kumedza uye ari nyore kugaya. Mapiritsi akafukidzwa mugelatin anobvisa huturu kubva mudumbu
Izvo zvimakumi matatu zvemukati mune zvekuwedzera zvinobvisa kuneta kwemuviri uye kwekuziva, zvinokurudzira kurara nekuzorodza muviri. Yakanakira hope yekurara mukudzivirira kusagadzikana-gumbo chirwere (mamiriro anokonzeresa kusadzora kukurudzira kufambisa makumbo) uye zviroto zviroto.
Kana iyo yekuwedzera yakatorwa kweanopfuura mazuva makumi matatu, yakawedzera kutarisisa uye kudzikisira fog yepfungwa uye kuwedzera kugona kwekuziva izvo zvakakonzera kuwedzera kutarisisa uye kuwedzera kugadzirwa panguva yebasa, uchiverenga, uchiverenga kana kuita chero chiitiko chemuviri.
Iyo yekuwedzera inofanirwa kutorwa pamwe nekudya kana usati warara. Iyo RDA ndeye matatu kana mana macapuleti pazuva pamwe nekudya, asi inogona kushandiswa mushure mekudya zvakare kana maturakiti ekugaya ari kushanda kwazvo panguva ino, ichipa mhedzisiro inokurumidza.
Iyo yekuwedzera ine mashoma mashoma mhedzisiro. Iyo inopesana inosanganisira kushungurudza mudumbu uye zvinyoro zvine musoro kana kutsimwaira. Nekudaro, zvinogona kutaurwa kuti Magnesium l-threonate yakachengeteka zvachose kutorwa sekuwedzera zuva nezuva ine mashoma kusvika kune akaipa mhedzisiro.
Ndekupi kwaunogona kutenga Magnesium l-threonate?
Neraki, vazhinji vagadziri, vatengesi uye zvigadzirwa vanotengesa chinoshamisa chinowedzera - Magnesium I-threonate. Inowanikwa zviri nyore pamhepo zvakare uye mumwe haafanire kunetseka kuitenga. Nekudaro, chinhu chimwe chete chekuchengeta mupfungwa ndechekuti yakachipa haina kunaka. Gara uchitsvaga rakanakisa mhando, mutengesi anovimbika uye ane mbiri uye mugadziri, uyo ane maitiro ekugadzira nekuchengetedza
Magnesium l-threonate poda Australia
MuAustralia, iyo yekuwedzera inowanikwa mune zvese hupfu uye capsule fomu. Chigadzirwa chinowanikwa se - Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
mutengo - AUD 43.28
Supplement Chokwadi nezve chigadzirwa
Kushumira Saizi 1 scoop (ingangoita. 3.11 gramu)
Kushumira Pese Mudziyo ungangoita makumi matatu
Kushanda kamwechete kweiyo yekuwedzera (Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) inopa zviuru zviviri zvemamirigiramu emagesium l-threonate, iyo inoshandura kumamirigiramu zana nemakumi mana emamiriyoni emagetsi anonyungudika anoteedzerwa Mg. Uropi hunotora zvirinyore kuwedzera kwehutano hwehuropi hwakagadziriswa uye kuyaruka kwevechidiki. Iyo yekuwedzera yekubatsira mukuchengetedza synaptic kubatana pakati pehuropi maseru uye inowedzera hutano hutano maseru ekuratidzira nzira. Iyo inonaka, inodziya michero punchi yakasanganiswa neupfu hwekunwa musanganiswa.
Citric acid, chingamu acacia, maltodextrin, zvakasikwa flavour, stevia mushoma, silica.
Magnesium l-threonate poda Canada
MuCanada, iyo yekuwedzera inowanikwa se - Naka Platinum Magnesium l-threonate
mutengo - CAD 46.99
Wedzera chokwadi nezve chigadzirwa
Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l - threonate inowanikwa sekuwedzera muCanada yakaratidzirwa kuve ndiyo yega fomu yemagnesium inogona kuwedzera mwero wemagesium muuropi. Iine mamirigiramu e144 eMg uye 2000 mamirigiramu e magnesium l-threonate PRO MG12 inogona kuchengetedza huropi kubva mukudzikisira kwendangariro uye kugadzirisa zviratidzo zvehosha yekutanga yeAlzheimer.
Zvisungo - Chiyero chega chega chemacapsule matatu chine Magnesium l-threonate 3 milligram (2000 milligram ye elemental Mg)
Microcrystalline cellulose, magnesium stearate (sosi yemidziyo), hypromellose (capsule ingredient)., Iine HAPANA yakawedzerwa gluten, nzungu, mazai, zvigadzirwa zvemukaka, hove kana hove, zvigadzirwa zvemhuka, chibage, mavara ekugadzira kana zvinwiwa, gorosi kana mbiriso.,
Magnesium l-threonate poda United Kingdom
MuUnited Kingdom, iyo yekuwedzera inowanikwa mune zvese hupfu uye capsule fomu. Icho chigadzirwa chimwe chete chinowanikwa muAustralia.
Ramba wakanyatsovharwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma
Magnesium I-threonate - danho rinotevera
Magnesium yakakosha kune hutano hwakanaka hwepanyama uye hutano hwepfungwa. Iyo chaiyo yekurapa kukosha kwehutano hwepfungwa hwemagesium inotsauswa nekusagona kwayo kupinda kuburikidza neiyo dziviriro yehuropi. Magnesium I-threonate inokwanisa kurarama neiyi nekupinda yakananga munzvimbo dzinodiwa dzehuropi. Sezvo vanhu vazhinji vachitambura nekunetseka kwekuziva nekuda kwekushayikwa kwemagesium mumuviri wavo, zvinofanirwa kupa pfuti kuMagnesium I-threonate poda mukuvandudza kugona kwehuropi kutsungirira dambudziko.
Ruzivo rwunopihwa rwakavakirwa pane zvekutsvagisa zvinhu uye zvakawanikwa. Izvi hazvina kubvumidzwa neDFA uye hazvina kuitirwa kuti zvione, kurapa kana kudzivirira chero chirwere kana matambudziko ehutano.
Tichifunga kuti Chikafu & Dhavhidha Administration haina kudzora zvekuwedzera nenzira imwecheteyo painenge ichiongorora nekutarisa zvinodhaka, munhu anofanirwa kutsvaga mabrands anozivikanwa nevechitatu, senge NSF International (yekuAmerican chigadzirwa kuyedza, kuongorora uye kupa chitupa sangano), Labdoor, kana Underwriters Laboratories, yekuchengetedza uye mhando.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, funga zvekudzivirira zvinowedzerwa zvine zvigadzirwa zvekugadzira, senge mavara eakagadzirwa, zvinonhuwira uye zvinodzivirira.
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG. Oral application yeMagnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine-indoses Allodynia uye Hyperalgesia neTransization yeTumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κB Signaling. Anesthesiology. 2017 Jun; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. PubMed PMID: 28306698.
Wang J, Liu Y, Zhou LJ, Wu Y, Li F, Shen KF, Pang RP, Wei XH, Li YY, Liu XG. Magnesium L-threonate inodzivirira uye inodzosera kukanganisika kwekuyeuka kwakabatana neanoropathic kurwadziwa nekukanganisa kweTNF-α. Kurapa Chiremba. 2013 Sep-Oct; 16 (5): E563-75. PubMed PMID: 24077207.
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR. Chisingaperi chekudya magnesium-L-threonate inomhanyisa kutsakatisa uye inodonhedza kudzoreredza kudzoserwa kwechimiro chekunakidzwa kwekudzora Pharmacol Biochem Behav. 2013 May; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. PubMed PMID: 23474371; PubMed Pakati PMCID: PMC3668337.
Resveratrol poda (501-36-0)